GOYNTA QOYAN EE JIILAALKA EE GURIGA - MUSHROOMS
Cuntada oo dhadhan kulul iyo dabacsanaan xuubka abuurista xafladaha kiriinka badan oo dhibaato leh, gaar ahaan marka la diyaarinayo jiilaalka. Waxaan rabaa in aan ka takhaluso qadhaadhka sababa caanaha caanaha ah, isla markaana isla markaasna ay sii wadaan adkeyntooda asalka ah. Inkasta oo sifooyinkaas iska hor imaadka ah ee boqoshaada, haddana waxay weli heleen meel ay ku jiraan suxuuno badan. Intaa waxaa dheer, kuwa jecel "ugaadhsiga aamusnaanta" waxay u mahadcelinayaan sida ay u badan yihiin fitamiinada iyo borotiinka, iyo sidoo kale waxyaabaha ay ka kooban yihiin kalooriga, taas oo la mid ah hilibka. Waxaan ku guuleysanay inaan soo aruurinno talooyin ka soo jimicsi khibrad leh oo wax ka barto si faahfaahsan sida loo diyaariyo boqollaalka caanaha leh cagaarka muddada qaboobaha.
Sida dhirta oo dhan, wakiillada caanaha ee Russula ayaa aad u dalbanaya geedi socodka qalajinta, taas oo lagu fulin karo maaha oo keliya iftiinka qoraxda, laakiin sidoo kale foornada, dabka.
Waa muhiim! Sababtoo ah dhadhanka cheesecakes, waxay ku jiraan liiska ee boqoshaada xaaladaha si degan oo la cuni karo. Ma aha sunta iyo ma aha hallucinogenic, laakiin waxay ku habboon yihiin isticmaalka kaliya ka dib daaweyn gaar ah.
Haddii aad dooratay mid ka mid ah siyaabaha badan ee goosashada xilliga jiilaalka ee qoyaanka, waa inaad leedahay boqoshaada dhalinyarada ah ee aan cirrid lahayn ka hor intaadan bilaabin shaqada. Isu ururi tijaabooyinka isdaba jooga ah, si taxadar leh u baaro, nadiifi ka soo haray caleemaha iyo dhulka. Ka dib markaa, tirtir maro qoyan, laakiin maydhin. Biyaha si dhakhso ah ayaa loo naqshadeeyey qaab dhismeedka koobabka kaynta, taas oo ka dhalatay taas oo ay luminayaan sifooyinka dhadhanka, iyo waqti ka dib waxay noqon karaan kuwo cufan oo qadhaadhaya. Boqoshaada waaweyn waa in lagu kala qaybiyaa kala badh, dhammaantoodna gooyaan lugaha.
Hadda waa waqtigii lagu go'aansan lahaa meesha aad ka geli doonto boqoshaada caanaha xilliga jiilaalka.
Sida loo qalajiyo boqoshaada caanaha hab dabiici ah
Dharbaaxo ku dhajiya dhar hore loo kariyay oo ah qalab aan dhar lahayn ama boqoshaada adag adag waxay ku dul yaallaan hawada maalin cadceed ama qolal qallalan oo fiican. Waa lagama maarmaan in qalajinta ay ka dhacdo waddada, meel ay ka ilaaliso dabaysha iyo boodhka. Xulashada habboon waa qashin ama saqaf.
Si aad u diyaariso boqoshaada caanaha hawada iyo qorraxda, waxaad isticmaali kartaa saabuunta alwaax, warqad xargaha iyo xitaa miis caadi ah. Xaaladahaan, meelaha banaan waxaa lagu faafiyaa lakab khafiif ah waxaana loo sameeyaa si loo soo celiyo waqtiga. Qolalka qorraxdu waxay lagama maarmaan u yihiin boqoshaada ilaa ay ka lumaan casiirkooda, noqdaan kuwo qalalan oo jaban. Si tan loo sameeyo, jawiga wanaagsan mararka qaarkood ku filan.
Sida loo qalajiyo boqoshaada caanaha isticmaalaya foornada
Marka qoyaanka dariiqa wadada uma ogalaan wax karinta dabiiciga ah, qalaji boqoshaada caanaha foornada. Marka ugu horeysa waxaa lagu hayaa heerkul ilaa 50 darajo meel sare ee foornada. Marka qoyaanka ka baxo, 4 saacadood ka dib, heerkulka ayaa si tartiib ah loogu hagaajin karaa heerkul ah 75 darajo iyo dib u habayn hoose. Ha ilaawin inaad soo celiso qashinka oo aad hubiso inaysan daalanayn. Waxaa lagu talinayaa in lagu qalajiyo heerkulka bilowga ah. Haddii aad rabto inaad gashato dhowr suxood oo ah hadiyado kalluun ah ee qalajinta, waad awoodi kartaa, adiga oo aan sugin dhamaystirka nidaamka digsiga ugu horeeya, ku rid midka labaad ee safka sare. Laakiin xusuusnow in qayb kasta, sheyga waa in la dhaqaa oo gebi ahaanba qalalan.
Ma taqaanaa? Guriyaalku waxay diidaan boqoshaada la qalajiyey, waxay rumaysan yihiin in geeddi-socodka ay luminayaan dhadhanka oo ay noqdaan midab madow.
Boqoshaada la diyaarshay ayaa la dhigayaa bacaha balaastikada waxaana loo diraa kaydinta meelo badan oo ur xun. Ka hor intaadan cunin, waa in si dhaqso ah loo dhaqo oo loo ilaaliyaa biyo dhowr saacadood si ay u dhicaan qadhaadhka qadiimiga ah.
Sidee loo kariyaa boqoshaada caanaha xilliga qaboobaha
Boqoshaada caanaha saliidda ah waxay noqdeen kuwo caan ku ah cuntooyinka kala duwan ee loo kariyo jiilaalka. Waa banaanyahan kuwaas oo aad u jecel kubbadda heerarka kala duwan. Iyadoo ku xiran doorashooyinka dhadhanka, waxaa jira dhowr farsamooyin salting. Had iyo jeer had iyo goor way ka baabi'isaa khatarta ah in boqoshaada ay noqoto mid aan waxba tarayn.
Sida loo diyaariyo boqoshaada caanaha ee salting qaboobaha
Ku nuuxso koobabka kalluunka dhadhanka ah ee kalluunka waxay heli doonaan kaliya ka dib marka ay sameeyaan tabaha wax lagu kariyo. Habka diyaarinta, sida caadiga ah, waxay u baahan yihiin in la xalliyo, la xalliyo, lagu nadiifiyo haraaga ciidda oo miisaamaya. Isla markiiba iska tuur boqoshaada la cayayaanka leh cayayaanka ama gooryaanka ku nool iyaga. Ka dibna biyo raaci dhammaantood, siiba iyadoon biyo raacin adoo isticmaalaya dhar dhaqid ama caday. Xawaashka nadiifka ah ayaa ku haray saddex maalmood oo ah digo dhalaalaya oo qoyaan leh.
Biyaha waxay u baahan yihiin in la cusboonaysiiyo maalin kasta 4tii saacadoodba. Haddii jikada, meesha uu jiro awooda, waa kulul, waxay ku filnaan doontaa laba maalmood. U diyaargarowga waxaa lagu hubiyaa adoo cunaya qayb yar oo ah boqoshaada. Haddii aanay si qadhaab ah u dhicin, si fiican ayaa loo mayraa, shay-baarkana waa la jaraa.
Sida loo miliciyo boqoshaada caanaha xilliga qaboobaha hab qabow
Ka hor inta aan la kariyo boqoshaada caanaha xilliga jiilaalka leh tiknoolajiyadaan, waxaa muhiim ah in ay qallafsan u qaadaan - tani waxay ka tarjumaysaa dhadhanka. Cunto fudud oo la kariyey oo aan caadi aheyn uma baahna maaddooyinka xad-dhaafka ah.
2 koob oo cusbo ah;
caleen qubo oo aan lahayn albaabyo;
caleemo dhowr ah oo cherry ah (waxaa lagu beddeli karaa currants);
dhowr ah oo toon ah oo toon ah;
5 kg culeys.
Cusbada caanaha iyo isbeddelka weelka diyaarsan. Qoryaha alwaax, digsi dhaldhalaalka ayaa sameyn doona. Waxaa muhiim ah in suxuunta aysan laheyn kala-go'ay iyo lebistan. Mushahar yaryar ah ayaa loo rogay milix kasta si gooni ah. Markaas si deeqsinimo leh waxaan u kala qaadnaa toonta, fardaha la jarjaray. Si aad qajaarkaaga ka dhigto mugdi, khudaarta khibrada leh waxay kugula talinayaan inaadan si adag u xirin faashad, kaas oo aad ku dari karto caleemaha haray oo dhan, oo ay ku jiraan malayga.
Ka dibna waxaan ku daboolnaa saxan (haddii aynu ka hadlayno dukuminti) ama goobada, waxaan ku cadaadineynaa wax culus, laakiin yar, sidaa daraadeed boqoshaada ugu dhakhsaha badan ayaa lagu daadin doonaa brine in la sii deyn doono. Waxaan u soo diri karnaa mashiinka si aan u hubinno inaysan jirin wax caaryo ah.
Haddii aad milixdo likaha caanaha ah marka ugu horeysa ee aad qabtid, xasuuso: si looga fogaado tan, lakabka sare waa inuu had iyo jeer ku jiraa brine. Bil gudaheed waxaa suurtagal ah in aad miiskaaga kala soocdo saliidda. Mala-beereedka la diyaariyay ayaa ku dhuftey cadaan jidheed leh oo dhadhan, waxay ku jiraan dhalooyinka ku jira dhalada ama bidixda tuubada.
Waa muhiim! Marnaba ha ku xirin boqoshaada cusbada leh dabool adag. Tani waxay gacan ka geysataa horumarinta maadooyinka dhirta oo keena botulism iyo sumow.
Boqolaal caanaha la macaan yahay ayaa loo isticmaalaa si loogu diyaariyo salad fudud, suxuunta xafladaha, cunto fudud oo kala duwan iyo cutlets cunto nafaha ah. Waxaa sidoo kale loo adeegaa sida saxar gooni ah leh saliid gabbaldayaha iyo basasha.
Sidee loo milixdaa boqoshaada si aad u kulul (bangiyada)
Habkani waxaa loogu talagalay taageerayaasha saboolka ah ee suxuunta boqoshaada. Boqol caano ah oo dhadhan fiican leh ayaa la kariyaa karaa dhowr asbuuc. Sidoo kale, farsamada ayaa loo tixgeliyaa inay ammaan tahay, maxaa yeelay xilliga goosashada boqoshaada ayaa kulaylka la daaweynayaa. Salting waa isku dar kulul sidoo kale dhib ma ahan. Halabuurka marinade wuxuu kaliya ka noqon karaa khal iyo cusbo, waxaana lagu kabi karaa caleemaha laurel, currant, cherry, malayga; chives, dill, allspice ama basbaaska madow. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ayaa la ballaarin karaa aad jeceshahay.
Wixii marineysid boqoshaada ee isku-dabiiciga caadiga ah ayaa loo baahan yahay:
2 qaado oo milix ah;
1 kg oo maskooyin ah;
6 qaado oo khal ah;
2 qaado oo sonkor ah.
Boqoshaada diyaarisay jarjar oo ku rid dheriga biyaha. Ka dib markii la karkariyo, isku kari ilaa 10 daqiiqadood oo kale, ka saari xumbo. Isku qas cusbo iyo sonkor biyo, ku dar khal iyo dab dami. Marka uu boogo, ku dar boqoshaada oo isku kari ilaa 20 daqiiqadood kadib, ka dibna, waxaan ku wareejinaynaa dhalooyinka oo u rogaa daboolka.
Markaad dooranayso habka wax lagu kariyo, dad badan ayaa xiiseynaya sida loo xafido boqoshaada cusbada leh. Marka la barbardhigo luminta habka qabow. Miisaanka noocan oo kale ah wuxuu joogi karaa maqaasiinka muddo ka badan lix bilood, oo la daboolay iyo sannadduna ma dhici doonto. Run ahaantii labada dhinacba way adag yihiin, qajaarrada waxay ku haboontahay buuxinta pies iyo maraq.
Siyaabaha loo xakameyn lahaa isugudbinta
Dhamaan dadka wax lagu qaboojiyo ee musqusha ayaa inta badan la joojiyaa. Kadibna, boqoshaada caanaha ka dib dhalaalidu waxay la mid yihiin wax walwal ah, cawl iyo mid aan fiicnayn.
Sida iska cad, qaabkani ma aha mid fudud oo u baahan aqoon gaar ah:
Caanaha - boqoshaada qoyan. Haddii aad u dirto barafeeyaha iyada oo aan ka hor shaqeyneyn, waxay ku hayn doonaan qadhaadh dabiiciga ah oo aysan ku habboonayn.
Hoosudhaca dareenka, ayaa sii kordhaya oo likaha loo habeeyay.
Ka hor inta aan la jarin, boqoshaada caanaha waa in lagu xalliyo qiyaasta. Googo googooyso.
Boqoshaada barafaysan waxaa lagu kaydin karaa wax ka badan afar bilood heerkul ah -14 digrii.
Mushrooms waxaa la dhalaalin karaa hal mar.
Marka barafka, boqoshaada caanaha laguma dhejin microwave ama foornada.
Ka hor inta aan la qaboojin, boqoshaada caanaha la kariyey, la shiilay ama la jarjaray.
Ma taqaanaa? Waddamada Reer Galbeedka, Giriiggu ma aqoonsana, isla mar ahaantaas, boqrooyinkani waxay caan ku yihiin dhul-beere ka dib.
Cuntada qoyan qoyan
Boqoshaada kala-soocaya si fiican ayaa loo dhaqaa oo loo nadiifiyaa wasakh. Xaaladaha qaarkood, waxaa lagu talinayaa in la qooyey sida salting. Sidaa daraadeed, qadhaadhku sidoo kale way baxaan. Ka dib markii la raaco nidaamkan, boqoshaada waxay ku waraabiyeen biyo karkaraya waxayna ku jiraan baagag qaboojiye. Waxa kale oo aad ku deyn kartaa boqoshaada cusbada leh qabow. Ka hor inta aysan si taxaddar leh loo tirtirin qoyaan badan.
Caanaha la karkariyey ee la kariyey
Badeeco la nadiifiyey oo la dhaqay ayaa lagu tuurayaa dheriga biyo karkaraya. Ka dib karkariyo kasoobax 10 daqiiqo oo kale kadibna ku dhex rid colander. Marka biyuhu si buuxda u miiraan, boqoshaada waxaa lagu buuxiyaa qaboojiyaha. Qoyaanka ka yar ayaa weli ah - waxa sii fiicnaanaya badeecada.
Barafka la dubay
Boqoshaada oo la jarjaray oo la jarjarey ayaa dhulka ku duuban, ku shubay digsi kulul oo kulul oo la shiilay 20 daqiiqo saliid gabbaldayaha. Salt iyo basbaas ay u dhadhamiyaan. Wixii sameynta daboolka dahabka ee dahabka ah ee daqiiqadaha ugu dambeeya waa in laga saaro. Marka uu la qaboojiyo qaboojiyaha, waxaa loo qaybiyaa weelasha waxaana loo diraa qaboojiyaha. Waxaad ku ciqaabi kartaa boqoshaada caanaha foornada iyada oo aan ku darin saliid. Si aad u qoyso si fiican uumi, u dhig heerkulka ilaa 180 darajo oo si joogto ah u walaaqaya waxyaabaha ku jira digsiga. Musqulaha qaboobaha barafka.